आफ्नै घरमा पालेको कुकुरले टोक्दा २ हप्ताका बालकको मृ’त्यु !
घरमा पालेको कुकुरले खेलौना सम्झेर टोक्दा २ हप्ताका बालकको मृ’त्यु ! काठमाडौं – घरमा पालेको कुकुरले टो’केर २ हप्ताका बालकको मृ’त्यु भएको छ । खासमा कुकुरले ती बालकलाई खेलौना सम्झेर खेलिरहेको थियो । यस क्रममा कुकुरले बालकलाई खेलौना ठानेर समात्नको लागि २३ पटक बालकको टाउकोमा दाँत गा’डेको थियो ।
आश्चर्यको कुरा कुकुर यसरी खेलिरहेको बेला बालककी आमा पनि त्यही कोठामा सोफामा सु’तिरहेकी थिइन् । कुकुरले टो’केर ग’म्भीर घा’इते भएका बालक रुबेन म्याकनल्टीलाई तत्काल अस्पताल लगिएको थियो । २ हप्तापछि उपचारको क्रममा उनको मृ’त्यु भयो ।
इङल्याण्डको याजलेमा भएको यो घटना २०१८ सेप्टेम्बरको हो । अहिले यो घटनाबारे अदालतमा सुनुवाइ भएको हो । अदालतमा मृ’तक रुबेनका मातापिता डेनियल म्या’कनल्टी र एमी लिचफिल्डसँग उनीहरुले बच्चाको विषयमा यस्तो ला’परवाही किन गरे भनेर सोधिएको थियो ।
द सनको एक रिपोर्टका अनुसार सुनुवाइमा यो कुराको पनि खुलासा भयो कि रुबेनका मातापितालाई पहिले नै केही सामाजिक कार्यकर्ताले बच्चालाई आफ्ना दुई कुकुरहरु फिजी र डोटीको साथमा एक्लै नछोड्न चे’तावनी दिएका थिए ।१८ नोभेम्बर २०१८ का दिन एमी आफ्ना छोरा रुबेनको साथमा सोफामा सुतेकी थिइन् ।
डेनियल केही कामले घरबाहिर गएका थिए । जब डेनियल घर आए त्यतिबेला उनले उनका छोरामाथि उनले पालेको स्टेफेर्डशायर बुल टेरियर प्र’जातिको कुकुर डोटीले आक्रमण गरेको देखे । डेनियलले तत्काल ९९९ मा फोन गरेर नेशनल इमरजेन्सी रेस्पोन्स सर्भिसलाई यसबारे जानकारी दिए ।
उनका अनुसार उनी घर पुग्दा उनका छोरा रोइरहेका थिए र टाउकोबाट र’गत आइरहेको थियो ।बालकलाई तत्काल एडेनब्रुकको अस्पताल लगियो । जाँचमा डाक्टरहरुले बच्चाको म’स्तिस्क, स्पा’इनल र स्क’ल चो’ट लागेको पाएका थिए । उपचारका क्रममा १३ डिसेम्बर २०१८ मा रुबेनको मृ’त्यु भयो ।
एक प’शु चिकित्सा फ’रेन्सिक विशेषज्ञ साइमन न्युबरीका अनुसार कुकुरले बच्चालाई सानो शि’कार वा खेलौना ठानेको थियो र कुकुर त्यससँग खेल्ने कोसिस गर्न थाल्यो । तर, यसो गर्दा बच्चाको ज्यान गयो ।
२०७८ पुष २९, बिहीबार प्रकाशित 1 Minute 152 Views